၈.၉ လက်မ iPad Mini Pro ၏အယူအဆ အိုင်ဖုန်းသတင်း
မူပိုင်ခွင့်များမှာကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့နာမည်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ခိုင်လုံသောအတွေးအခေါ်များဖြစ်သည် အနာဂတ်၌သူတို့သည်အလင်းကိုမြင်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အယူအဆများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သည်တူညီသည်ဟုဆိုနိုင်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းများကိုအများအားဖြင့်လက်တွေ့နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မနေ့က Apple ကစတင်လိုက်တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလအသစ်တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ် iPad mini Pro။ ငါဆောင်းပါး၌ကိုးကားသောသတင်းရပ်ကွက်များအရသိရသည်တစ် ဦး ကပစ်လွှတ်, ထောက်ပြသည် စတင်ရက်စွဲအဖြစ်ဒုတိယစာသင်ရန်။ ဤပုံစံသစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအယူအဆအချို့ကိုလူသိရှင်ကြားမထုတ်ပြန်မီအချိန်သည်ပြaနာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီ iPad Mini Pro အသစ်ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ Svet အက်ပဲလ်က ၈.၉ လက်မအရွယ် iPad ကိုပြသထားတယ် iPad Pro အကွာအဝေးတွင်ရှိသောဒီဇိုင်းနှင့်တူညီသည်မျက်နှာပြင်အသေးများ၊ မျက်နှာပြင်သေးငယ်မှုများ၊ Face ID နှင့် USB-C ဆက်သွယ်မှုများကိုအောက်ခြေတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Apple က iPad mini Pro ကိုထုတ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် ဒီဒီဇိုင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သော်လည်း၊ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့် iPad mini ၏ဒီဇိုင်းကိုပြန်လည်သက်တမ်းတိုးရန်နှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလများအရ (၎င်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဈေးကွက်ကိုထိရောက်ခဲ့သောမူလမော်ဒယ်နှင့်အတူတူပင်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်)၊ ရရှိနိုင်
ကောလဟာလများအရဤ iPad mini သစ်ကိုအသုံးပြုမည်ဟုဆိုကြသည် Face ID ရှိမှာမဟုတ်ဘူး၎င်းအစား Touch ID ကိုဘေးဘက်သို့အထူးသဖြင့် home ခလုတ်ကိုရွှေ့လိမ့်မည်။ ဆက်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း, ဒီ နေဆဲလျှပ်စီးဖြစ်လိမ့်မည်.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအကြောင်းပြောဆိုပါကအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်များက ၈.၄ လက်မမျက်နှာပြင်ကိုညွှန်ပြနေပြီးအချို့ကမူ ၈.၉ အထိဖော်ပြနိုင်သည်။ ရှင်းနေပုံရသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်မျက်နှာပြင်ဖြစ်လိမ့်မည် 8 နဲ့9လက်မအကြား.
ရှင်းနေသည်မှာ၊ ပစ်လွှတ်သည့်နေ့ရက်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ပက် » ၈.၉ လက်မ iPad Mini Pro ၏အယူအဆ
အသံနှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသည် Mac အတွက် WhatsApp သို့ရောက်လာသည်